अस्पताल भर्ना हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै पनि उनी रेकर्डिङ स्टुडियोमा थिए । छोरीसँगै उनले राजेन्द्र थापाको शब्द रहेको ‘पानी छाया नलाम माया...’ गाएका थिए । छुट्ने बेला उनले त्यही गीत सुनाए । स्वर झन् तरोताजा । ‘छिट्टै बाउ, छोरी र छोराले प्रस्तुति दिँदै छौं,’ उनले भने, ‘छोरीको एल्बम त्यहीँ दिउँला ।’ यसपछि मदनकृष्ण भ्याली होम्सको परिसरतिर इभिनिङ वाकमा निस्के । डाक्टरको सल्लाहअनुसार हरेक दिन उनले हजार पाइला हिँड्नुपर्नेछ । प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:३७
कार्तिक १९, २०७६ शरु जोशी
२०७६ सालका मुख्य चाडबाड पनि सकिए । सानु छँदा दसैंमा नौ दिन भगवती मन्दिरहरू गएको, नयां जामा छेकेको, बुइँगलभरि पाकेको फर्सी थन्काएको, खल्पीको अचार खाएको, चंगा उडाएको, टीका लाउँदा आशीर्वाद पाएको र दिनभरि कपालमा चिम्टीले जमरा अड्याउँदै मक्ख परेर लिंगे पिङ खेलेको सम्झना आउँछ । अहिले भने हतारको व्यवस्थापनमै दसैंतिहार टर्छ ।
अझ दक्षिणा आकर्षण, माटाको दियोको ठाउँमा चाइनिज दियो देख्दा चाडबाडको मौलिकता ओझेलमा परेको भान हुन्छ । तर अचेल हप्ता/दस दिनअघि नै ह्याप्पी दसैं, ह्याप्पी तिहार र ह्याप्पी छठका शुभकामनाहरू आउन थाल्छन्, सामाजिक सञ्जाल रंगिन्छ । यसका सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै पक्ष होलान् । तर यसले चाडबाडको ‘भाइब’ भने झ्याप्पै ल्याउँछ ।
दसैंका शुभकामनाहरू सजिलै आउँछन्, तर दसैं साँच्चैको कतिको ह्याप्पी हुन्छ भने कतिलाई दशा हुन्छ । यस पटकको दसैंमा कति नेपाली विदेशबाट आए कुन्नि !
दसैंमा करिब २५ लाख मानिस काठमाडौंबाट बाहिरिए । केही दिन काठमाडौंबासीले भीड र जामबाट राम्रै सास फेरे । तर चाडबाडको सडक सुरक्षाका प्रयास बावजुद यस पालिको दसैंमा १०१ नेपालीको सडक दुर्घटनामा ज्यान गयो । यी परिवारलाई जन्मभरका लागि दसैं दशा बन्यो । दसैंताका १९२ मोटरसाइकल, १४६ कार र जिपसहित ८६ बस दुर्घटनामा परेछन् । मृत्यु हुनेमा ७० पुरुष, १४ महिला र अन्य बालबालिका छन् । सवारी चाप, चालकको लापरबाही र अत्यधिक लोड नै दुर्घटनाको मुख्य कारण होला । विदेशमा चाडबाडका समय ट्राफिक नियम मिच्दा सजाय दोहोरो गरिन्छ । कडा सजायको डरले चालकहरू बढी होसियार हुन्छन् । चाडबाडका बेला यस्ता दोहोरो सजायको व्यवस्था नेपालका लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ ।
यी चाडबाड पदमा भएकालाई खुसी पार्ने अवसर बन्ने रहेछ । दसैंताका ट्रकभरि खसी ल्याएर कोशेली टक्र्याउने, मिठाइ, नगद, रक्सी उपहार दिने गरिन्छ । शिष्टाचारका बहानामा बाँडिने यस्तो उपहार सानु ढोकाबाट प्रवेश गरेर कहिले घूस र भ्रष्टाचारको दैत्य बनिदिन्छ, पत्तै पाइँदैन रहेछ । अपसोस, शिष्टाचाररूपी उपहारमा रमाउनेको संख्या भने सर्वत्र रहेछ । यस दसैंमा आँखैअगाडि एक कर्मचारीलाई एक चालकले कागजको ब्यागमा ‘वाइन’ थमाए । ती कर्मचारीले सरमैबेगर हाकाहाकी बोतल लिए । अचम्म, ती चालकले रक्सी लिएबापत सही गर्न कागज तेर्स्याए । मलाई आत्मग्लानि भयो । त्यसपछि कामका क्रममा म यताउता लागेँ, ती कर्मचारीले सही गरे वा गरेनन्, थाहा पाइनँ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता दसैंमा पनि हुनुपर्छ । दसैंमा कसैलाई खुसी पार्न खाम, खसी, रक्सी आदि बाँडिइन्छन् । यी दिने र लिने सबै भ्रष्टाचारी हुन् । जाबो त्यति त चाडबाडमा दिइन्छ नि, कुन ठूलो कुरो भो त, त्यति त शिष्टाचार पनि ‘मेन्टेन’ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्ला । तर ती सानातिना व्यावसायिक ‘मेन्टिनेन्स’ कष्टहरू नै पछि भ्रष्टाचाररूपी दानव भइदिन्छन् । अनि हामी स्वयं आसुरी या असत्यको बाटो हिँडिदिन्छौं । एकातिर त्रिशूलका रूपमा असुरमाथि सत्यरूपी भगवतीको जित मनाउन हामी तामझामसाथ दसैं मनाउँछौं, अर्कातिर ती आसुरी शक्ति हामीमा बढिरहेको होसै पाउँदैनौं । सत्यको प्रतिमूर्ति भगवतीको त्रिशूल हाम्रो आसुरी स्वभावमा पनि हानिनुपर्छ । कलियुगमा यस्ता असुरलाई मास्न साक्षात् भगवती त आउँदिनन्, तर हाम्रा नीति तथा कानुन नै सत्य वा भगवतीका स्वरूप हुन् । विजयादशमीको मूल सन्देश आसुरी शक्तिमाथि सत्यको विजय हो । यसमा ध्यान दिएर दसैंको मौलिक सन्देश फैलाउन सके दसैं सही अर्थमा मनाइन्थ्यो, असत्यमाथि न्यायको जित हुन्थ्यो । खुसीको कुरा, यो दसैं–तिहारमा ४६४ ठूला जुवाडे समातिए, जुन ह्याप्पी दसैंको सन्देश भयो नेपालीलाई ।
यस पालि दसैं धान्न महँगीले भने सबैलाई धौधौ पार्‍यो । दसैंमा ३ अर्बको त स्याउ नै आयात भएछ ! खसीको मासुको भाउ बढेर १,२५० प्रतिकिलो पुग्यो । महँंगो खसी किनेको पैसा भारतै जाने हो । अब अर्को दसैंमा ७५३ स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकाका घरपरिवारलाई पुग्ने तरकारी, मासु, फलफूल उत्पादन गर्ने वार्षिक योजनामा पार्नुपर्छ । अस्ट्रेलियाबाट बोर जातका खसीको बीउ ल्याएर चितवनमा वीरभद्र आचार्यहरूले आशलाग्दो काम सुरु गरेका छन् । यस पटक सरकारले निरोगिताको प्रमाणपत्र जाँचेर मात्र आउन दिएकाले भारतबाट आयात हुने खसीमा ४८ प्रतिशत कमी भएको समाचार आयो । सरकारको यो प्रयासलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।
यस पालि तिहारमा ३० लाखको सयपत्री फूल खरिद–बिक्री भएछ, जसमा ८० प्रतिशत आफ्नै उत्पादन रह्यो । नेपालकै भूमिमा फुलेको सयपत्री हेर्दा ठूलो, राम्रो, उज्यालो र पैसा तिर्दा पनि चित्त दुख्दैन रहेछ । फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको समाचारले वास्तवमै ह्याप्पी तिहार बनायो ।
दसैंको पूर्वार्धमा विश्व बैंकले २०१९ को प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजनेस गुड’ मा नेपाल ११० औंबाट ९४ औं स्थानमा पुर्‍याएको समाचार आयो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ह्याप्पी दसैं, तिहार र छठ बनायो । दसैंलगत्तै चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण, लक्ष्मीपूजाको दिन हिमालय एयरलाइन्सको काठमाडौं–बेइजिङ सीधा उडान पनि ह्याप्पी समाचार बन्यो । चिनियाँ पर्यटक सबैभन्दा बढी आइरहेको सन्दर्भमा यो उडानले पर्यटनलाई ठूलो टेवा पुर्‍याउन सक्छ ।
यस पालि हाम्रा कुलमानले बिजुली व्यवस्थापन गरेर, विद्युत् प्राधिकरणमा रातो र चन्द्र–सूर्यको ध्वजा त फैलाए, सँगै सबैका घर झलमल्ल पारेर दसैं, तिहार र छठलाई ह्याप्फी बनाए ।
प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:२८